DIID DILALKA SIYAASADEED
(SHHRF 0091/2007, 13 August 2007)
Ururka Xuquuqul Insaanka ee Suldaan Hurre (SHHRF) wuxuu dhaleecaynayaa dilkii naxdinta lahaa ee loo geystey Cali Iimaan Sharmaarke iyo Mahad Axmed Cilmi kuwaasoo ahaa labo weriye ee qiimo leh ee Soomaaliyeed kuwaasoo gaarey heerkii ugu sarreeyey ee khibradooda xirfadeed. Cali Iimaan Sharmaarke wuxuu wax ka aasaasay warbaahinta HornAfrik, halka uu Mahad Axmed Cilmi uu daadihin jirey barnaaminkii caan ah ee ka bixi jirey raadiyaha FMka ee Capital Voice oo qayb ka ah Shabakada HornAfrik.
Waxaannu tacsi u diraynaa qoysaskii, qaraabadii iyo asaxaabtii labadaas nin ee mintidiinta ahaa. Waxaannu kugu adkaynaynaa in aadan isu dhiibin cabsigelin. Aamusinta warbaahinta oo loo marayo cabsi-gelinta iyo dilka khaarajinta ahi waa qaab kale ee ah waxa loo yaqaan �dhaqanka dilka siyaasadeed�.
Walow aan wali la aqoon gacan-ku-dhiigleyaashii, fal-dembiyeedkaasi wuxuu shaki la�aan leeyahay calaamadaha dilka siyaasadeed ee Soomaaliya ka socda labaataneeyadii sannadood ee la soo dhaafay. Dadkii u dhintay waxa ay aamminsan yihiin waxaa ka mid ahaa Elman, Faarax Dheere iyo Suldaan Axmed Hurre.
Sannad ka hor ayay ahayd markii Soomaaliya iyo bulshada caalamku ka tiiraanyoodeen dilkii naxdinta lahaa ee Cabdulqaadir Yaxye, ninkaasoo u taagnaa wanaagga dalkiisa. Yaxye marna uma uusan malaynaynin in lagu hor dili doono xaaskiisa.
Dilkii Yaxye waxaa ka horreeyey dilkii siyaasadeed ee Suldaan Axmed Hurre, kaasoo ku noqoshadiisii dalkiisii hooyo ay u keentay in la khaarajiyo iyadoo aan cidna dembi loogu raacan dilkiisii.
Dilalkaan dambe ee soo noqday waxay ku tusinayaan baaxadda dilalka siyaasadeed iyo sida kuwa dadka laynayaa ay u abuurayaan xaalad ah �maxaa kaa galay cadowgaaga siyaasadeed mar haddii aad khaarajin karti (isla markaana aammusin kartid)�. Dhaqankani wuxuu wuxuu ka hirgalay dhammaan gobollada Soomaaliya kuwa ku guulaystayna waa inta gaarta meelaha ugu sarreeya. Maanta Soomaaliya waa dal ay dadka ugu qiimaha badani ay halis ugu jiraan in la dilo.
Warfaafin xilkas ah isla markaana xor waa shardi muhim u ah nidaam kaalmo ka gaysan kara midaynta bulshada Soomaaliyeed isla markaana xallin kara dhibaatooyinkeeda. Cabburinta ama baabi�inta war-baahintuna waxay sii carqaladaynaysaa ama sii murginaysaa wacyigelintii ay u baahnayd ee xagga isu dulqaadashadeeda bulsho iyo siyaasadeed ee waxyaalaha la isku khilaafsan yahay.
Mid ka mid ah dariiqyada ay Soomaalidu uga bixi karto dhibaatooyinkaan is dabajoogga ah waxaa weeye in aynnu niraahno �intaan ayaa dhibaato noogu filan� markaana aynnu u istaagno diidmada/ka hortagga dadka shaqada ka dhigtay kharbudaadda siyaasadeed.
Sultan Hurre Human Rights Focus (SHHRF)
Sannad Guuradii 5aad ee ka soo wareegtay dilkii Suldaan Hurre,
(SHHRF 0092/2007, 13 August 2007)
AGOOST 17, 2008 waa sannad guuradii 5aad ee ka soo wareegtay dilkii foosha xumaa ee Sultan Hurre, oo ahaa aqoon yahan doonayey inuu gacan ka gaysto wanaagga dalkiisa hooyo, gaar ahaan gobollada Puntland uu ka soo jeeday. Sida uu Col. Cabdullahi Yusuf ka qirtay maxkamada London ku taal waxaa Sultan Hurre khaarijiyey mid ka mid ah ilaalada gaarka ah ee Cabdullahi Yusuf. Waxaa ayana qaabkaas oo kale loo dilay Farax-dheere 2002, iyo Cabdiraxmaan Caydiid 1984. Waxaa raggaas oo dhan ka dhaxeeyey oo kaliya inay ka soo horjeedeen siyaasadda gurrac�n ee Col. Cabdullahi Yusuf.
Sultan Axmed Hurre waxaa la aaminsanyahay inuu u dhintay dil ama khaarajin siyaasadeed, ficil ayaantaan dambe ku soo siyaadaya Somaliya. Maalmo ka hor qoraalkaan marka la soo saaray ayay ahayd markii adduunku ku naxay dilkii Cali Imaan Sharmarke iyo Mahad Axmed Cilmi- labo suxufi oo caan ahaa, oo midna maamule ka ahaa Idaacadda Capital Voice, midna ahaa la-mulkiile Idaacadda Horn Afrique. Waxay ahayeen laba nin oo aad loogu baroor-diiqay. Sanad in ku dhow baa ka soo wareegtay dilkii foosha xumaa ee Cabdulkadir Yaxya, aqoonyahan ku can baxay raadinta nabadda, nasiibdarrase lagu hor toogtay xaaskiisa. Dilalkaas oo dhami waxay ka turjamayaan caqli xumada manta Somaliya taal oo ku dhisan ka takhalus ciddii aad is-qabtaan.
Agoost 17, waxay ku gashay taariikhda maalinta loo baroor diiqo aqoonyahannada iyo dadka magaca leh ee nabadda jecel loona dilay sababo siyaasadeed. Waa lagama maarmaan inaan wada dhaleecayno dilalka siyaasadeed. Waa muhiim in la yaraahdo MAYA in dad inta barqo la dilo ciduna wax ka qaban ama aan xitaa la baarin. Waxaan si culus u canbaareyneynaa gaboodfalyada ka socda Xamar iyo meelo kale ee Somaliya.
Waxaa dad kooban ee ka socda gobollada Puntland ka wadaan London xaflad la yiri waxaa lagu xusayaa 8 guuradii samaynta Puntland. Ku aaddinta maalintaas 17ka Agoost waxaan u aragnaa meelka dhac. Waxaan leennahay miisaan ha la saaro xumaanta iyo samaanta mamulka Puntland iyo taariikhdiisa.
Somalida oo dhan waxaan ka codsanaynaa inay 17ka Agoosto u xasuustaan maalintii aqoonyahan loo dilay fikirkiisa iyo siyaasadda uu aamminsan yahay. Waxaan idinka codsanaynaa inaad dareenkiinna u cabbirtaan maalintaas siyaabo kala duwan, hal hayskeennuna waa �Maya dhaqanka is-khaarajinta Siyaasadeed�..